Archive du 20191126
Andry Rajoelina Tsy mila an’i Rina ho ben’ny tanàna ?
Nifantoka betsaka tamin’ny propagandy an-kolaka hoenti-mandresy lahatra ny vahoakan’Antananarivo hisafidy ny kandidam-panjakana ny votoatin’ny fandaharan’ny filoha Rajoelina tamin’ny fahitalavi-panjakana omaly.
Politika sy fitantanana firenena Marina ny an-dRavalomanana
Na i Hery Rajaonarimampianina na Rajoelina dia samy mikofoka manorina sekoly, manao “kits scolaires”, mandray mpampianatra, manofana. manamboatra lalana, manamboatra fotodrafitrasa, miaro ny tontolo iainana,...
Rivo Rakotovao “Mila manara-dalàna ny rehetra”
Sesilany ireo fandikan-dalàna nandritra ny fampielezan-kevitra. Betsaka no tsy mankasitraka ny fomba amam-panao ataon`ny fitondram-panjakana.
Rina Randriamasinoro Hitory noho ny fanaratsiana azy
Manoloana ny fanaratsiana sy fanosoram-potaka azy mialoha izao fotoana hanatontosana ny fifidianana ho ben’ny tanàna izao dia nilaza omaly ny talen’ny fampielezan-kevitry ny kandida ho ben’ny tanàna,
Solombavambahoaka Tokony hiala rehefa tsy hiasa…
Ao anatin’ny fivoriana ara-potoana ny eo anivon’ny Antenimieram-pirenena ankehitriny. Betsaka ny zavatra andrasana amin’izy ireo toy ny fandaniana ny LFI 2020, fandrafetana ireo mpikambana eo anivon’ny HCJ…
Mba handresena ny hala-bato Hefao ny adidy, mandehana mifidy …
Miantoka ny ho avy politikan’ny firenena ny fifidianana izay hotanterahina rahampitso alarobia 27 novambra. Fifidianana miisa roa izay no efa notanterahina teto, dia ny nifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka.
Kaominina Antsirabe I Nametrahana PDS
Notendrena ho filohan'ny delegasiona manokana (PDS) vaovao ao amin’ny kaominina Antsirabe Ranivomboahangy Lalanirina Emmanueline.
Fanenjehana olom-panjakana ambony Ny lalàna no mbola mananosarotra
Tamin’ ny volana jona 2018 no nanao fianianana ireo mpikambana eo anivon’ ny Fitsarana avo (Haute cour de justice) saingy tapitra tamin’ny 05 febroary 2019 ny fe-potoam-piasana ireo depiote nandrafitra izany ka miandry indray ireo mpikambana vaovao.
Zandarimariam-pirenena Tena mila fanadiovana tokoa
Vita soa tao anaty fanarahan-dalàna sy fangaraharana ny fifaninanana ho mpianatra zandary andiany faha-75, izay natao nanerana ny nosy isaky ny faritra nandritry ny andron'ny 23 sy 24 novambra 2019.
Fifidianana ben’ny tanàna Kandida 5 namoy ny ainy
Nikatona tanteraka halina tamin’ny 12 ora ny fampielezan-kevitry ny fifidianana ben’ny tanàna.
Filohan’ny FIFA eto Madagasikara “Zava-dehibe ny baolina kitra any an-tsekoly”
Eto amintsika hatramin’ny alahady 24 novambra alina teo ny filohan’ny FIFA, Atoa Gianni Infantino, hotronin’ny delegasiona miisa 10 miaraka aminy ka anisan’izany ny Sekretera jeneraliny,
Baolina kitra Malagasy Resy tetsy Mahamasina avokoa ny Fosa Juniors omaly
Samy resy avokoa ny ekipan’ny Fosa Juniors omaly alatsinainy 25 novambra tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina.
Hambom-po diso toerana
Samy nanana ny nandraisany ny resaky ny filoham-pirenena omaly hariva tamin’ny fahitalavitra ny olom-pirenena tsirairay.
Fihariana sy fandraharahana Hohamoraina ny findraman’ny Malagasy vola
Hiasa eto Madagasikara ny Birao manelanelana ny banky sy ny mpihindram-bola (BIC) hanamorana ny fahazoan’ny Malagasy findramam-bola.
Fandaharan’asa FEC faha-6 Famatsiam-bola sisa andrasana
Nanomboka tamin’ny 11 hatramin’ny omaly 25 novambra ny fijerena ny tomban’ezaka andiany fahenina sady farany nataon’i Madagasikara amin’ny fandaharan’asa Facilité Elargie de Crédit (FEC).
Tetibolam-panjakana lasitra « Nisy fomba fandrafetana vaovao »
Mizara roa ny tetibolam-panjakana isaky ny minisitera raha ny voafaritra ao anatin’ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana taona 2020.
Varotra sy fanjifana Niaka-bidy ny menaka mandry
Tena mandeha ny varotra menaka eny amin’ny tsenan’Anosibe. Mahalany 40 ka hatramin’ny 60 litatra isan’andro mantsy ny mpivarotra iray rehefa tena mandeha ny tsena,
Foara vidy varotra andiany faha-11 Tsy mandoa fidirana izay hitondra alika hanao fampisehoana
Hotanterahina ny alakamisy 28 novambra haharitra efatra andro ilay Foara Vidy Varotra andiany faha-11, karakarain’ny Vondrona Vidy Varotra
Mahavoky, Andravoahangy, Faravohitra 5 andro nisesy nijaly rano ny mponina
Tao anatin’ny 5 andro dia nisedra olana tamin’ny fahatapahan-drano ny mponina teny amin’ny faritra Mahavoky, Andravoahangy, ary Faravohitra.
Fiovaovan’ny toetr’andro Tsy maintsy ampivadiana amin’ny fambolena
Miha mivoatra hatrany ny fahapotehan’ny tontolo iainana kanefa tsy dia hifantohan’ny fiarahamonina.
Vono olona mampivarahontsana Nalaina ny lela, fo, aty ary betron-dohany
Tranga mampivarahontsana sy mampihoron-koditra no niseho tao amin’ny kaominina Ambanivohitr’i Iarintsena Andranoboboaka, Distrikan’Ambalavao, Faritra Matsiatra Ambony ny alin’ny sabotsy hifoha ny alahady teo.
Taom-pambolen-kazo 2019 – 2020 Zanakazo 40.900 no efa vonona ho an’ny faritra Atsinanana
Ho fiatrehana ny taom-pambolen-kazo 2019 -2020 sy ho fanatrarana ny tanjona napetraky ny filoham-pirenena handrakofana ala an’i Madagasikara dia iray amin’ireo Faritra 22 nahitana ny tanin-janakazo be velarana indrindra ny tao amin’ny DREDD Atsinanana .
Andravoahangy Tra-tehaka ireo mpanendaka amin’ny alina
Andrenesana antso vonjy hatrany eo Andravoahangy ampitan’ny mpivarotra solomaso mihazo an’ny Look’s isan’alina manomboka amin’ny 9 ora alina.
Rongony milanja 60 kilao Roalahy saron’ny polisy
Rongony milanja 60 kilao, efa vita karaoty no saron’ny polisim-pirenena, tao amin’ny kaomisaria Soanierana Ivongo, ny alahady hariva lasa teo, tokony ho tamin’ny 5 ora sy 05 minitra.